Kuwani waxay noqon doonaan saddexda iPhone 11 ee Apple ay soo saari karto deyrta | Wararka IPhone
Kuwani waxay noqon doonaan saddexda iPhone 11 ee Apple ay bilaabi karto deyrtaan
Iyadoo la raacayo isla qaabkii la bilaabay sanadkii hore markii la soo saaray iPhone XS, XS Max iyo XR, Apple waxay bilaabi kartaa seddex nooc oo ah iPhone 11 (magac aan wali la xaqiijin) oo leh astaamo kala duwan, marka lagu daro cabirrada shaashada kala duwan. Iyo faahfaahinta ugu dambeysa ee la ogaa, waxaan sameyn karnaa qiyaas ku saabsan sida mid walba oo ka mid ah moodooyinka la soo bandhigay uu noqon doono.
Ma jiro USB-C, mashiin cusub oo loo yaqaan 'haptic', cibaaro cusub oo muhiim u ah kaamerada mid kasta oo ka mid ah qalabka, labada gadaal iyo kii hore, processor-ka cusubWaxaan kuu sheegeynaa wararka ugu xiisaha badan iyadoo loo eegayo wararkii ugu dambeeyay ee soo muuqday, hoos.
1 Saddex moodal, saddex bandhig, isku processor
2 Mashiinka cusub ee loo yaqaan 'haptic'
3 Kaamirooyin cusub
Saddex moodal, saddex bandhig, isku processor
Apple waxay soo saari doontaa seddex nooc oo iPhone 11 ah, dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin isku xira danab. Bedelaadda isku xiraha USB-C sanadkii hore ee loo yaqaan 'iPad Pro' ayaa ka dhigtay wararkii mudada dheer socday ee ahaa in iPhone-ka uu ku dambeyn doono isla isku xirahaas. Laakiin waxay u muuqataa in Apple ay ilaalinayso gaar ahaanta USB-C oo leh iPad Pro si sax ah sababta oo ah dabeecaddaas "Pro" iyo iPhone-ka ayaa sii wadi doona inuu ilaaliyo Hillaaca soo jireenka ah ee is-waafajinta iyo ku-dallaca, iyo sidoo kale gudbinta codka tan iyo markii aanu jirin aaladda dhegaha.
Intaas waxaa sii dheer, dhammaantood waxay wadaagi doonaan isla processor-ka, A13, markale wuxuu isku dhufan doonaa awoodda kii ka horreeyay wuxuuna naga yaabi doonaa kartidiisa garaafka. Moodooyinka ayaa horeyba looga yaqaan gudaha sida D42 (iPhone 12,3) kaas oo noqon doona bedelka iPhone XS; D43 (iPhone 12,5) taasi waxay noqon doontaa midka lagu beddelo iPhone XS Max; N104 (iPhone 12,1) taasi waxay noqon doontaa mida guuleysata iPhone XR. Labada nooc ee ugu horreeya waxay yeelan doonaan shaashadda OLED, tan saddexaadna waxay hayn doontaa shaashadda LCD, dhammaantood waxay la mid yihiin qaraar la mid ah kan hadda jira, sidaa darteedna waxay u badan tahay inay isku cabir yihiin.
Ma jiri doonaan wax isbadal ah qaabeynta shaashadda, warka ayaa sii jiri doona, haddii laga yaabo inuu ka yaryahay inkasta oo ay tahay xan aan la xaqiijin taasna waxay ku dhammaan kartaa sannadka dambe. Isla nidaamka Aqoonsiga Aqoonsiga Face ayaa loo ilaalin doonaa dhammaan saddexda qalab, iyada oo aan lahayn ID ID midkoodna badhanka muuqaalka ah ama ku dhafan shaashadda hoosteeda.
Mashiinka cusub ee loo yaqaan 'haptic'
Waxaa jiri doona isbadal ku yimaada mashiinka haftiga ee hada jira. Kuwa aan aqoon waxa aan ka hadlayno, mashiinka haptiga ayaa ah midka hubiya in markaan wax qoreyno ay u muuqato inuu ka dhex guuxayo kumbuyuutarka hoostiisa, ama marka aan 3D taabanno ay u muuqato inuu jiro farji farta hoosteeda. Mashiinka cusub waxaa gudaha looga yaqaan "Leap Haptics" lamana oga waxa ay u soo kordhin doonto si ugub ah, laakiin waxay la xidhiidhi doontaa "Haptic Touch" oo beddeli doonta 3D Touch ee moodooyinka cusub. Tikniyoolajiyadda aqoonsatay heerarka kala duwan ee cadaadiska shaashadda ayaa ka baabi'i doonta moodooyinka cusub, sida ay saadaalinayaan macruufka 13 Betas, tanna "Leap Haptics" ayaa noqon doonta midda lagu hubinayo in isticmaaluhu uusan dareemin faraqa.
Maxaa looga tagayaa tiknoolajiyaddan aan aakhirkii caadeysanay? Apple ma awoodi karin inay ku soo bandhigto iPad-ka arrimo farsamo awgood, ama iPhone XR ama iPod taabashada, malaha sababo la xiriira arrimo dhaqaale, sidaa darteed waxaan dooran lahaa nidaam cusub oo u ekaysiinaya shaqadaas iyada oo aan loo baahnayn qalabka lagu dhisay muuqaalka. Waxaan arki doonaa natiijada kama dambaysta ah markay na tusayaan moodellada cusub.
Labada nooc ee ugu qaalisan waxay lahaan doonaan seddex kamaradood oo gadaal ah, maadaama aan horeyba uga daalnay inaan ku aragno moodooyinka lagu faafiyo internetka, oo leh bilic qurxoon ama ka sii xun. Kamaradda saddexaad waxay noqon doontaa xagal ballaadhan oo u oggolaan doonta inay soo qaaddo sawirro aad u ballaaran. Shaqadan muuqata ka sokow, Apple waxay soo saari doontaa muuqaal cusub oo loo yaqaan "Apple Frame" kaasoo si toos ah u qabsan doona aagga ku wareegsan sawirka iyo fiidiyowga aad qaadatay si aad goor dambe u sixi karto qabashada.
Kamaradda hore ee sii kordheysa ee muhiimka ah ayaa sidoo kale horumarin doonta u oggolaanaya qabashada fiidiyowyada dhaqdhaqaaqa gaabiska ah ee illaa 120fps. Waxay u badan tahay in Apple ay soo bandhigi doonto warar kale oo la xiriira kamaradda, laakiin taasi waa loo kaydin doonaa munaasabadda soo bandhigida maxaa yeelay faahfaahinta lama yaqaan. Nooca "ugu raqiisan" wuxuu lahaan doonaa laba kamaradood, oo leh shaqooyin sida kuwa ay iPhone XS iyo XS Max leeyihiin hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kuwani waxay noqon doonaan saddexda iPhone 11 ee Apple ay bilaabi karto deyrtaan
Waxaa la joogaa waqtigii loo aadi lahaa XR hadda jira, waa qajaar, midda 128 GB mid durba waa ku dhowaad 700 oo shey oo websaydhyada qaarkood waana ka qurux badan tahay orkooyinka Mordor ee soo baxaya
Ma ogtahay inay jiraan dabeecad leh astaanta Apple? Waxaan kuu sharxeynaa sida loo qoro.
Tani hubaal waxay noqon doontaa naqshadda iPhone XI, ma waxaad u aragtaa wax fool xun?